Kachasị Akaụntụ Akaụntụ Alakụba Eprel 2021 Pros na Cons
Akaụntụ Akaụntụ Islam kacha mma 2021
E nwere ugbu a gburugburu 1.8 ijeri na-eso ụzọ nke Islam okwukwe. Nke ahụ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ndị bi n'ụwa. Enweela ọtụtụ mkparịta ụka n'ime iri afọ ole na ole banyere ụdị azụmaahịa na itinye ego dị iche iche dị mma, mana ozi ọma ahụ bụ na ọ ga-ekwe omume ịzụ ahịa halal yana akaụntụ azụmaahịa islam.
Omenala n’okpukpe Alakụba, ekwenyere na ịzụ ahịa dị haram, ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ka nwa na-acha ọcha dị ka na. Ọzọkwa, e mepụtara akaụntụ azụmaahịa Alakụba iji mee ka ndị mmadụ nwee okwukwe Alakụba nwee ike ịzụ ahịa ebe ha ka nọ n'okwukwe ha.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-azụ ahịa azụmaahịa, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụhaala na ị na-azụ ahịa site na ịgbakọ ihe ị na-ekpughe na ebumnuche ziri ezi na ụgwọ ọrụ - mgbe ahụ ị gaghị emebi iwu Islam.
Na ibe a, anyị ga-ekwu maka ihe ọ bụla site na ihe akaụntụ azụmaahịa Alakụba bụ na otu esi emetụta ntọala ntọala Islam. Wel ”na-atụlekwa ihe akụ nwere ike ime, yana otu esi achọta onye na-akwado iwu Sharia dabara adaba maka mkpa ahia gị.
Kedu ihe bụ Akaụntụ Ahịa nke Islam?
Na nkenke, e mepụtara akaụntụ azụmaahịa ndị Alakụba kpọmkwem maka ndị chọrọ ịzụ ahịa azụmaahịa, na-agbaso ụkpụrụ niile nke iwu ego Islam. Isdị akaụntụ a na-akpọkarị 'akaụntụ na-enweghị ego' - nke pụtara na enweghị mmasị (nke amachibidoro ndị nke okwukwe Alakụba).
Ọ bụrụ n ’ikwesi ntụkwasị obi nye ọrụ a, ị ga-achọ ịchọta akaụntụ azụmaahịa Alakụba iji jigide iwu nke iwu Sharia n’achọghị ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ nweta ọmụrụ nwa.
Agbanyeghị na ọnweghị ọtụtụ ndị na-ere ahịa alakụba dịka ndị na-ere ahịa ọdịnala, ọ na-apụta ọtụtụ afọ na-apụta n'afọ. Okwesiri ighota na ebe obughi ndi ulo oru ahia obula inye otutu 'ihe omuma ndi Islam', otutu gha enye akuko nke oma - ma haziri ya dika ichoro ya na imebe iwu Sharia.
Ntọala nke Tral Halal
Dị ka anyị metụrụ, e mepụtara akaụntụ Islam iji kwado ụkpụrụ ndị bụ isi na iwu ego nke Alakụba nke nwere ike ime ka usoro azụmahịa ahụ sie ike.
Mmekọrịta dị n'etiti ndị na-agbaziri ego na ndị na-agbazinye ego dị ezigbo mkpa ma a bịa n'ịtọ ntọala nke iwu Sharia. Dịka ọmụmaatụ, a na-eche na mmasị adịghị mma n'ihi na mmadụ 'na-agbaziri' ọtụtụ ihe egwu yana 'onye binye ego' na-enweta ụgwọ ọrụ. Na okwukwe Alakụba, a na-akpọ mmasị a 'Riba', mana karịa na nke ahụ n'otu oge.
Anyị ejikọla ntuziaka na ntọala nke ịzụ ahịa halal, iji mee ka ìhè dị ntakịrị banyere iwu ndị kachasị mkpa ị ga-erubere iji nọgide na okwukwe gị.
Aka na Aka ahia
Dị ka anyị kwuru, isiokwu banyere ịzụ ahịa a na-ewere ebe niile abụghị nke egbutu na nke akọrọ. Dika iwu Sharia si kwuo, ahia bu ihe ziri ezi ma oburu na eme ya 'aka na aka'. Ọtụtụ narị afọ gara aga, nke a zoro aka na ihu na ihu ahia nke ihe dịka ọlaedo, ọka wit, ụbọchị na nnu.
N'ezie, gaa n'ihu na narị afọ nke 21 na ọtụtụ azụmaahịa na-eme n'ịntanetị. Ọtụtụ agbanweela, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 60% nke ụwa ugbu a nwere ike ịntanetị, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ndị ahịa 10 na-eji ndị na-ere ahịa n'ịntanetị etinye ego mgbe niile na ahịa gburugburu ụwa.
Isi ala nke aka na aka ahia ka na - eguzo - a ga - emezigharị nkwekọrịta azụmaahịa ahụ n'ime otu 'nnọkọ' ahụ. Nke a pụtara na iwu niile dị mkpa ka emee ozugbo
Na Engish, okwu 'Riba' sụgharịrị ịbụ 'mmasị'. Na Arabic, ọ na-egosi mmụba na ngafe. Obi abụọ adịghị ya na Riba bụ ihe ọjọọ, n'ihi na a kwenyere na ọ na-akwalite uto na-adịghị mma na ọha mmadụ rụrụ arụ.
Ntughari banyere nkwenkwe a ka ekpughere na nkpughe mbụ nke Holy Quran n'etiti 609 CE na 632 CE;
“Ihe n younye dịka ọmụrụ nwa bawanye ụba akụ nke ndị mmadụ, anaghị arị elu na Chukwu; ma ihe ị na-enye n’ịhụnanya, na-achọ ihu ọma Chineke, na-aba ụba okpukpu. ”
Onwere ihe ndi igbochi nke ndi okwukwe nke Islam - a na akpo ya 'Bai' al-'Inah '(ire na nbughari).
Nke a bụ otu ihe atụ nke ụdị ịgbazinye ego:
Were ya na mmadụ resịrị gị ihe dị mkpa
Naghị eji ezigbo ego azụrụ akụ ahụ
Onye nbinye ego ahụ na-enye gị akụ ahụ na kredit na ọnụego a kara aka
Onye na-agbazinye ego gụnyere uru bara uru
Ozugbo, onye biniri ego zụtara akụrụngwa azụ, na ezigbo ego (na ofu ego)
Nke a pụtara na onye na-agbazinye ego bụ onye nwe akụ ahụ - yana ịbịnye ego ị chọrọ
N’ikpeazụ, ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ maka uru nke ihe ndị ahụ ekwuru n’elu na nkeji
Na mgbakwunye na nke a, ịkwesịrị ịkwụ ụgwọ akụkụ uru
Mgbe ị na-ere ahịa halal site na ụlọ ọrụ ndị na-ere ahịa nke ndị Alakụba, onye na-eweta ga-ahụ na ị gaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ nweta mmasi ọ bụla na akaụntụ gị na usoro Riba ahụ e kwuru na mbụ. Maka ndị na-amaghị, otu a ka ọ dị maka akaụntụ ụlọ akụ, ego mgbarakwa ụlọ na akaụntụ nchekwa.
Maisir: Ggba chaa chaa
A na-ahụ ịgba chaa chaa na egwuregwu nke cha cha dị ka ihe arụ nke ọrụ aka Setan dịka iwu Sharia si dị. Iwu a (n'etiti ndị ọzọ) na-achịkwa ntọala ndị a:
Ezi nlele na ma ihe ọ bụla a ga-ewere dị ka ịgba chaa chaa bụ ihe ọ bụla nwere ikuku nke 'ịba ọgaranya ngwa ngwa' banyere ya. Fọdụ ndị mmadụ na-ewere ahịa ahịa ka obere ntakịrị n'akụkụ maisir ma yabụ mmehie.
Ihe mere eji ewere ya dika nmehie bu na oburu na ima atu, gi bu ụbọchị trading - ị nọ n’ime ya ịkpata ego ọsọsọ. Akaụntụ ahia nke Islam na-ewere ihe ndị a niile iji nyere gị aka ịnọ na warara ma dị warara.
Gharar: Akwadoghi ya / Egwu Ekpebeghi
Financialzụ ahịa ego ọ bụla ebe ọnweghị nsogbu, ọ bụ 'gharar'. Nke a nwere ike ịgụnye azụmahịa azụmaahịa nke anaghị edozi ma ọ bụ kpebie - dị ka swaps, ọdịnihu, n'ihu, na nhọrọ. Anyị ga-ekwu okwu banyere akụ dịnụ / adịghị adị n'oge na-adịghị anya.
Ihe egwu ọ bụla na azụmaahịa gị ga-emebi itinye ụkpụrụ nke ego Islam. Ọ bụ n'ihi nke ahụ ka anyị ji atụ aro ka ị ghara ịnwa ime ya n'onwe gị, kama nke ahụ, mepee akaụntụ azụmaahịa Alakụba.
Nnoo usoro ahia obula nke na enye onyinye ntughari ahia nke Islam / swap gha aghaghi iru ala nke iwu ndi Islam, ma ka na-enye gi ohere inweta ahia zuru uwa. Nke a pụtara na ị nwere ike ịzụ ahịa na-enweghị mgbaghara maka imebi iwu nke iwu Sharia na enweghị nsọpụrụ n'okwukwe gị.
Zụ ahịa ọ bụ Halal ka ọ bụ Haram?
Azịza nye ma azụmaahịa ọ bụ ma ọ bụ nke azụmaahịa abụghị nke dị mfe. Nke a bụ obere ihe kpatara akaụntụ azụmaahịa Alakụba ji adị. N’ụzọ dị oke mkpa, ụfọdụ azụmaahịa ọdịnala ọdịda anyanwụ nwere ike ịmegharị n'ụzọ dị mfe iji dabaa ndị na-eso ụzọ okwukwe Islam.
A na-ahụta ọdịnihu na nkekọ amamịghe Haram. N'ihe banyere nkekọ (Sukuk), a machibidoro ha iwu n'ihi na e wuru ha dabere na ọnụego ọmụrụ nwa. Mgbe agbụ dị ahia site na CFDs - enweghị mmasị. Otú ọ dị, ọnụego nke ọnụego ọmụrụ nwa dị na isi nke mgbasa.
N'ihe banyere nkwekọrịta n'ọdịnihu, a machibidoro ha iwu n'ihi igbu oge nke azụmahịa.
Ọ bụrụ n'ịche maka ya otu a -
Mgbe ị bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta gị, ọrịre ma ọ bụ zụọ abụghị ozugbo.
Nke a megidere iwu 'aka na aka' nke iwu Sharia (lee anya n'elu).
Nhọrọ ọnụọgụ abụọ gụnyere ịnwa ịkọwa oge mgbanwe na ọnụego n'ime ogologo oge. Ofzọ a nke ahia bụ n'ezie ụzọ a na-ewu ewu maka ndị ahịa iji nweta ego mana ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na-ele anya na ọ bụ haram - nke kachasị n'ihi mmasị akwụpụtara ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka onye na-ere ahịa.
Dịka ị pụrụ ịhụ, maka onye okwukwe Alakụba iji akaụntụ azụmaahịa ọkọlọtọ ọ nwere ike inwe ntakịrị mgbagwoju anya. Ọ bụ ya mere eji chepụta akụkọ ndị a - iji nye onye ọ bụla ohere ziri ezi na ahia.
Ọzọ, anyị ga-ehichapụ alụlụ na ihe ị nwere ike ahia na akaụntụ ahia Islam.
Kedu ihe m nwere ike iji Akaụntụ Islam Trading?
N'agbanyeghị iwu ndị ahụ ekwuru nke ekwesiri ịgbaso iji kwụsie ike n'okwukwe ndị Alakụba, site na iji azụmaahịa na-eji azụmaahịa Alakụba eme ihe na onye na - ere ahịa na - achịkwa - ọ ga - eju gị anya otu ị ga - esi azụ ahịa n'ezie.
Maka ọdịmma gị, anyị edepụtara akụ ị ga - enwe ike ịzụ ahịa ozugbo ị nwetara onwe gị akaụntụ azụmaahịa Alakụba.
Anyị kọwara n'ihu na Riba bụ otu n'ime ụkpụrụ dị mkpa na iwu Alakụba. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụ ihe a na-ahụkarị mgbe ị na-ere ahịa na Forex ahịa maka ndị na-etinye ego na-emeghe ụfọdụ ọnọdụ mgbe nnọkọ ahịa ahụ kwụsịrị.
Ọnọdụ a mepere emepe na-emepụta 'swap commission' nke bụ n'ezie ego ego abalị, ma ọ bụ mmasị - nke amachibidoro. Enweela arụmụka dị ukwuu n'etiti ndị ọkà mmụta banyere ma ọnụọgụ ego dị ka ịgba chaa chaa ma ọ bụ na ọ bụghị ya.
Onye ọ bụla nke na-ere ahịa n'ahịa ahịa ahịa na-agbanwe agbanwe maara na ịzụ ahịa ego abụghị nanị ịgba chaa chaa. N'aka ozo - enwere atumatu, na-amu nyocha oru oru na data onu ahia. Na nke a, Forex abụghị n'ezie egwuregwu nke ohere.
Nwere ike ịzụ ahịa majors, umuaka na umuaka site n’aka onye na-eweta akaụntụ Islam gị. Cheta na onye ọ bụla na-ere ahia ga-adị iche, yabụ ọ bụrụ na i nwere mmasị n'otu ụzọ ọ ga-abụrịrị na ị na-enyocha nnweta na ikpo okwu ahụ.
Ndị a bụ ihe atụ ole na ole nke ụdị ụzọ azụmaahịa nke ọtụtụ akụkọ azụmaahịa Alakụba na-akwado:
Orsmụaka: EUR / GBP, GBP / AUD, AUD / JPY, GBP / CAD, EUR / NZD, CHF / JPY
Ndị isi: EUR / USD, EUR / USD, USD / JPY, AUD / USD, NZD / USD, USD / CHF
Ihe omuma: USD / HKD, USD / SEK, USD / SGD, EUR / Gbalịa, USD / MXN, EUR / HUF
Mgbe ị na-ere ahịa azụmaahịa site na akaụntụ azụmaahịa Alakụba, a naghị akwụ ụgwọ ọ bụla - yabụ a na-ewere ya dị ka ihe ziri ezi. Otu ihe ị ga-ele anya maka ya bụ ụgwọ ndị ọzọ dịka commlọrụ. E kwuwerị, onye na-ere ahia kwesịrị ịkpata ego n'ụzọ ụfọdụ.
Anyị ga-abanye n'ime isslọrụ anya n'ihi na mgbe e mesịrị na.
Dị nnọọ ka mgbe ị na-ere ahịa Forex, enweghị mkpụrụ ego crypto ọ bụla naanị maka ndị ahịa Alakụba. Agbanyeghị, mgbanwe ọnụahịa ha dabere na ọkọnọ na ọchịchọ karịa ọmụrụ nwa, yabụ na enyere ikike cryptocurrencies n'okpuru iwu ego Islam. Nke ahụ kwuru, asịrị nwere na a na-enwe ọganihu na mgbanwe mbu nke Islam crypto.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime cryptocurrencies dị maka ahia site na ọtụtụ akaụntụ azụmaahịa Alakụba - ọ bụ ezie na ihe karịrị 5,300 dị adị:
Cryptocurrencies adabereghị na ọnụego ọmụrụ nwa, yabụ ọbụlagodi na enweghị akaụntụ azụmaahịa Alakụba, ị nwere ike ịzụ mkpụrụ ego crypto. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụ ahịa karịa otu ihe onwunwe ebe ị ka nọ na halal, ịnwe ezigbo akaụntụ Islam kwesịrị.
N'okpuru iwu nke iwu alakụba, ịnwere ike ịzụta, jigide ma ree ere ahịa halal site n'aka onye na-ere ahịa gị. A sị ka e kwuwe, a na-ere ngwaahịa dị ka ọka wit na textiles kemgbe ọtụtụ narị afọ. N'ezie, onye amụma a ma ama Muhammad (SAW) bụ akụkọ niile a ahia ahia ọchụnta ego.
N'ụbọchị nke a, enwere ọtụtụ nsogbu ndị ọzọ ị ga-elezi anya mgbe ị na-ere ahịa ahịa halal. Iji maa atụ, o doro anya na ị gaghị etinye ego na ịsị ebe omume biya dị ka Guinness, mana enwere isi awọ. Otu ụlọ ọrụ yiri ka ha bụ ndị iwu kwadoro, ha nwere ike iji azụmaahịa ha rụọ ọrụ ha.
Ka anyị nye gị ihe atụ ole na ole nke ụlọ ọrụ site n'echiche nke Islam iwu.
Ahịa weere oke haram: Bankslọ akụ ndị nwere mmasị, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, njem nleta, mmanya na-aba n'anya, ụlọ ọrụ mkpuchi azụmaahịa, ụlọ oriri na ọ nightụ nightụ
Ahịa weere dị ka ihe haram, na akụkụ ụfọdụ n'ihi omume: Ndị ụlọ ọrụ na-eji akaụntụ ụlọ akụ ọmụrụ nwa, ụlọ ọrụ ejiri ego mgbazinye ego.
Akekọrịta weere halal: Ngwa, ọla, akụrụngwa ọgwụ, n'ichepụta, mbupu, uwe, ala na ụlọ, arịa ụlọ, ngwa ọrụ, ngwaahịa ọrụ ubi
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere mpaghara ntụ ntụ doro anya ma a bịa n'ihe aka na mbak, yabụ mgbe ụfọdụ ihe niile nwere ike ha agaghị adị ka ọ dị. Mgbe ị na-ere ahịa ebuka site na akaụntụ azụmaahịa Alakụba ị gaghị ekpughere ego ụlọ ahịa ọ bụla ma ọlị. Kama nke ahụ, ị ​​nwere ike ịzụ ahịa dị ka ngwaahịa na ọla kọpa iji wulite pọtụfoliyo gị.
CFDs bụ aghụghọ - n'ihi na ị nweghị akụnụba kpatara ọtụtụ mmadụ na-ewere ya na o megidere iwu Sharia. Nke a bụ ebe ọzọ ebe akaụntụ azụmaahịa ndị Alakụba na-abata. Mgbapụta ahụ na-ewepụ mmasị niile na swaps na ngwaahịa, indices, shares, ETFs and bonds.
N’uzo di nkpa, odi nkpa ichoputa ihe a n’ile ahia gi. Nke a bụ n'ihi na ndị na-enye ọrụ agaghị enye naanị ngwa ego dị iche iche kamakwa ha nwere usoro, ọnọdụ na ụgwọ pụrụ iche.
Abia na onodu ‘ikpo oku’ nke omenaala ị ga-akwụ ụgwọ ‘adịchaghị adị’ - nke n’enye gị nhọrọ iji zụta mbak, ego na agbụ wdg. Olile anya bụ na ọnụ ahịa ahịa ga-arị elu n’elu ọnụego mmega ahụ tupu ngwụcha. Ọ bụrụ na nke ahụ emee, uru sitere na azụmaahịa ahụ bụ ọdịiche dị n'etiti ọnụahịa abụọ - na ewepụ ego a na-akwụ ụgwọ.
N'ihe banyere akaụntụ azụmaahịa ndị Alakụba, a na-akpọ nhọrọ oku dị ka 'urbun' (ntụgharị bekee - nkwụnye ego). N'iji urbun, onye na-etinye ego na-akwụ ụgwọ dị elu na akụ ma ọ bụ nke mbak. Ebumnuche nke ọnụahịa ahụ ga-akarịrị ụgwọ nrụpụta / ụgwọ.
Ọ bụrụ na ọnụahịa anaghị ebili karịa ụgwọ iku, mgbe ahụ naanị ọnwụ kpatara bụ ụgwọ ha dị elu (nke a na-akpọkwa aha dị ka ọnụahịa). Na-eme, Otú ọ dị, nwere ikike ịhapụ nke a.
N'ihe banyere 'itinye' nhọrọ, na azụmaahịa Alakụba, a na-akpọ nke a 'gbanwee urbun '. Yabụ, na-ere ere nwere ike na-ere na a gaghị agara price mgbe e mesịrị ala iji nweta uru ma ọ bụrụ na akpan owo uru adalata.
N'ihe banyere akaụntụ azụmaahịa Alakụba - a na-akpọ agbụ 'Sukuk'. Ihe a bu ngw’oru dika ngw’oru na -enweghi mmasi ma obu ugwo. Eziokwu ahụ bụ na ndị ahịa Alakụba chọrọ itinye agbụ na pọtụfoliyo ha ka na-ekwesị ntụkwasị obi nye ọrụ ahụ.
Ihe ejiri mara Sukuk bu inwe ihe nchebe dabere na ya, dika agw’ulo nke mbu adighi enye ndi nwere ego ohere inweta ihe. Kama nke ahụ, a na-ahụta ya dị ka ụgwọ ụgwọ a na-ekwenyeghị n'okpuru iwu Alakụba.
Mgbe ị na-ere ụdị nkekọ a site na akaụntụ azụmaahịa Alakụba - a ga-enye gị ikike ile mmadụ anya n'ihu na akụ ahụ. Akụ ahụ ga-abụrịrị nke iwu kwadoro, nke onye na-ere ahịa gị ga-elekọta. Cheta, mgbe a bịara n'ihe metụtara akụ, enwere ike ịnwe ụgwọ ga-apụta na uru gị.
Pesdị Akaụntụ Islam Trading
Ka ọ dị ugbu a, ị ga-enwe obi iru ala na ị maara na ị nwere ike ịzụ ahịa na nọsie ike n'okwukwe gị site na ịzụ ahịa site na akaụntụ azụmaahịa Alakụba.
N'iburu nke ahụ n'uche, anyị ga-akọwa ụdị ole na ole trading azum iji kpalie gị mmụọ.
Alakụba siwing islam
Ịzụ ahịa swing bu ezi okwu nwa oge di iche-iche nke ahia di iche iche na ETF, odi okwa, Forex, cryptocurrencies, nhọrọ na ebuka. A ga-emeghe ọnọdụ ndị a ogologo oge karịa otu ụbọchị azụmaahịa, oge ụfọdụ izu.
N'ihi ya, naanị otu ụzọ ị nwere ike isi gbanwee ahịa ebe ị na-agbaso iwu Sharia bụ site na akaụntụ azụmaahịa Alakụba. Iji akaụntụ islam esighi-agbanwe, dịka ọmụmaatụ, ga-agba mbọ hụ na ị zere ọnụego ọmụrụ nwa ọ bụla ma agaghị ahapụ ọnọdụ gị n'abali.
Daybọchị ahia nke Islam
Dị ka ị nwere ike ịma, ịzụ ahịa ụbọchị gụnyere imechi ọnọdụ gị tupu ụbọchị ahia agwụ ma ahịa ahụ mechie. N'ihi ya, enweghị ego ịgbanwee, ya mere, a na-ahapụ ụdị azụmaahịa a n'ime iwu ego Islam.
Otu uru dị n'ịzụ ahịa ụbọchị site na akaụntụ azụmaahịa Alakụba bụ na ịkwesighi ichegbu onwe gị maka imechi ọnọdụ ahụ. Agbanyeghị, ọ dị ezigbo mkpa na ị mechie ọnọdụ ahụ tupu njedebe nke oge azụmaahịa iji hụ na ị zere ụgwọ ego abalị.
Otú ọ dị, nke a ga-abụ esemokwu ma ọ bụrụ na ị na-eji akaụntụ azụmaahịa ọkọlọtọ. Kama nke ahụ, site na iji ihe Islam akaụntụ ahia - gbanwee ego ndị na-adịghị adị, yabụ na ịkwesighi ichegbu onwe gị maka idobe ọnọdụ ụbọchị ahia na-emeghe n'ahịa oge gara aga.
Na isi, scalping bụ omume imeghe obere ọnọdụ dị iche iche n'ahịa, azụmaahịa ọ bụla na-emechi n'ime nkeji, ma ọ bụ n'ọnọdụ ụfọdụ sekọnd. Typedị ahia a dabara ndị na-eso ụzọ okwukwe Alakụba n'ụzọ zuru oke dịka ọnọdụ ọ bụla na-emechi na ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ. Dị ka ndị dị otú a, ọ nweghị ego gbanwere n'agbanyeghị ụdị akaụntụ gị.
Na usoro iwu, ị nwere ike ịzụ ahịa n'ụzọ a site na akaụntụ azụmaahịa ọdịnala. Mana, site na ịzụ ahịa site na azụmaahịa azụmaahịa Alakụba, ọ bụghị naanị na ị na-agbanwe karịa iji mee ka ọnọdụ meghee ogologo oge, mana echekwara gị na Riba.
Akaụntụ Islam Trading: isslọrụ
Dika anyi kowara na ntuziaka a, nnukwu ihe di iche n'etiti ahia na akaụntụ ọkọlọtọ na akaụntụ Islam bụ mmasị mgbanwe (ma ọ bụ enweghị). A na-emepụta mmasị mgbanwe ahụ site na ịhapụ ọnọdụ na-emeghe n'abalị.
Site n'ịzụ ahịa na akaụntụ azụmaahịa Alakụba, ewepụrụ mmasị niile. Site na nke ahụ, ndị na-agbanwe agbanwe ka kwesiri ị nweta ego maka ọrụ enyere. Nke a bụ ebe ụgwọ ndị ọzọ batara.
Ndị a bụ ndị a na-ahụkarị ụgwọ ndị agbakwunyere na akaụntụ azụmaahịa Alakụba:
Ọnụ ego niile dị n'elu bụ ihe ziri ezi na nke a ga-anabata ndị na-eso ụzọ Alakụba.
Uru na ọghọm nke Akaụntụ Trading nke Islam
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ihe na ndụ, ebe enwere uru enwere ọghọm. Anyị edepụtara uru na ọghọm nke akaụntụ azụmaahịa Alakụba n'okpuru.
Na-azụ ahịa n’ụzọ dị mfe n’enweghị nsọpụrụ iwu Sharia
Nwere ike ịzụ ahịa ebuka
Gbanwee pọtụfoliyo azụmahịa gị n'ime iwu alakụba
Enweghị ego gbanwere / Riba
Fọdụ ndị na-ere ahịa Islam na-akwụ ụgwọ dị ukwuu iji mejupụta enweghị swaps
Obere oke ikike maka igbochi na iche iche
N'agbanyeghị ntakịrị akaụntụ azụmaahịa niche
Otu esi achọta ego ahia Islam kacha mma
Tupu ịmalite ịzụ ahịa site na iji akaụntụ azụmaahịa Alakụba, ịkwesịrị ibu ụzọ chọta onwe gị ezigbo onye na-ere ahịa iji mezuo ahịa gị kwekọrọ na Sharia.
Anyị ejikọgo ọnụ nke usoro metrik ị kwesịrị ịlebanye anya maka mgbe ị na-achọ ezigbo onye na-ere ahịa maka mkpa gị.
Mgbe ị na-enyocha ndị na-ere ahịa na-enye akụkọ azụmaahịa Alakụba, ị kwesịrị ị na-ahụ mgbe niile na enyere ikikere nhọrọ gị ikikere ma nyekwa iwu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bụ onye bi na UK ma ndị FCA nyere ikikere maka ndị na-ere ahịa gị, mgbe ahụ a ga-echekwa ego gị ruru £ 85,000 (ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ baa ego).
Ọbụghị naanị na ego gị ga - ekewa iche iche ma chekwaa ya n'okpuru ụdị usoro a - mana a na-enyocha ụlọ ọrụ na-ere ahịa ma na-enyocha nyocha oge niile iji hụ na ihe niile dị n'elu.
Goodzọ dị mma iji hụ na enyere onye na-ere ahịa gị ikikere bụ ịlele weebụsaịtị maka nọmba ikikere. Y’oburu n’inweghi obi ike na ndaba a nogo iwu a, inwere ike lelee ya na webusaiti FCA (ma obu ndi ozo n’ahu aru).
Readgbasa na-eme nnukwu ọdịiche na uru gị na ọghọm mgbe ọ bịara n'ịzụ ahịa - ma iji akaụntụ azụmaahịa Alakụba ma ọ bụ na ọ bụghị. Ọ bụrụ na ị maghị, mgbasa bụ ọdịiche dị n'etiti ọnụahịa ịzụta na ire ere.
Nke a bụ ihe atụ nke mgbasa (nke a tụrụ na 'pips''::
Cheedị na GBP / USD nwere a ịzụta ọnụahịa 1.2933
The ere ọnụahịa maka GBP / USD bụ 1.2930
Iji ihe atụ a, GBP / USD nwere mgbasa nke 3 pips
Ikwusi ọbụna ị ga-achọ ịbawanye ahia a site na 3 pips
Ihe ọ bụla mgbe 3 pips ga-abụ uru
Ala na-agbasa ka mma mgbe ị na-na na na ichu nta n'ihi na nke kacha mma islam trading akaụntụ. Ma, ohere ị ga-ahụ bụ mgbasa dị elu dị na ụdị akaụntụ a. Ihe kpatara na-agbasa na ụgwọ na-abụkarị elu bụ n'ihi na ore ahia adịkwa ego na ọmụrụ nwa ụgwọ.
Ọtụtụ ndị ahịa na-achọ ilekwasị anya na akụ ole na ole, ọkachasị ịmalite. Ọ dị mfe ịmụta ahịa ole na ole karịa ha niile. Emechakwa, ịmụ otu esi agụ ma nyochaa usoro ọnụahịa nwere ike iwe ọtụtụ afọ iji ghọta nke ọma.
Enwere ike iji ihe ndekọ azụmaahịa ndị Alakụba zụta plethora nke klaasị akụ dị iche iche ebe ha ka na-asọpụrụ iwu ego Islam. Mgbe ị na-achọ ezigbo onye na-akwado iwu Sharia, anyị na-adụ ọdụ ịchọta nke na-enye ọtụtụ ngwa ọrụ iji nyere gị aka ịgbasa pọtụfoliyo halal gị.
Ngwa ahia ahia na ihe omuma
Dịka anyị kwuworo, ọ nwere ike iwe ọtụtụ afọ iji mara nka nke ịzụ ahịa, ịghọta data ọnụahịa akụkọ ihe mere eme na ndị ọzọ. Dị ka o kwesịrị, onye na-ere ahịa gị kwesịrị inye ọtụtụ ihe ngosipụta aka ọrụ iji nyere gị aka ịghọta echiche ahịa.
Ọ gwụla ma ị na-eji usoro EA (robot) zuru ezu na-akpaghị aka ma na-azụ ahịa n'ụzọ na-agafe agafe, mgbe ahụ, ngwá ọrụ ahịa ndị a niile bara ezigbo uru. Ebe ọ bụ na ọ bụghị onye na-ere ahịa ọ bụla ga-enye ngwa ọrụ ndị a niile, opekata mpe ụfọdụ ga-abara gị uru.
Ọ bụrụ na onye na-azụ ahịa enyi gị nke Islam anaghị enye ngwaọrụ na nyocha n'elu ikpo okwu ya, ị nwere ike ịnweta ha n'efu na ebe ọzọ.
Ndị a bụ ụfọdụ ngwaọrụ bara uru ndị ahịa jiri:
MT4 / 5 ahia ahia
Broker gbasara mgbasa
Kalenda akụkọ akụ na ụba
Akụkọ akụkọ ego dị ka Reuters
Oge mgbanwe mpaghara
Mgbe a bịara na isi ihe metrik iji chọpụta, ụzọ nkwụnye ụgwọ dị ebe ahụ na mgbasa, ụgwọ na nkwado ndị ahịa. Ọ bụghị akaụntụ ahịa azụmaahịa Alakụba niile bụ otu, yabụ ị ga-achọ ijide n'aka na usoro ịkwụ ụgwọ ị nabatara na ikpo okwu onye na-ere ahịa tupu ịbanye.
Paymentzọ ịkwụ ụgwọ a na-ahụkarị nke akụkọ azụmaahịa Alakụba na-enye dị ka ndị:
E-wallets dị ka PayPal na Skrill
Buru n'uche na ọ bụrụ na itinye nkwụnye ego na bank na akaụntụ gị - ọ na-ewekarị oge ịbata. Ọ bụrụ n ’ịkwụnye site na iji e-obere akpa, dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịmalite ịzụ ahịa ozugbo.
Nhọrọ nkwado ndị ahịa na-enye site na ụlọ ọrụ na-ere ahịa dị mkpa. Nwere ike ịlele nhọrọ ndị dịnụ site na ịga na ikpo okwu tupu ịbanye. Kwesịrị ịdị na-ele anya maka nkata ndụ 24/7, yana akara nkwado ekwentị ka ọ bụrụ na ị nọ na ndozi ma chọọ azịza - ị nwere ike ịbịakwute mmadụ ozugbo.
Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa gị nọ na ntanetị mgbasa ozi, nke a nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji na-edekọ akụkọ ụlọ ọrụ, yana ijikọ ndị ahịa ndị ọzọ.
Etu esi emeghe akaụntụ ahia Islam
Ka ọ dị ugbu a, ekwesịrị ịmara gị nke ọma iji mepee akaụntụ azụmaahịa Alakụba gị wee bido ịzụ ahịa. Iji mee ka ị gawa ụkwụ aka nri, anyị ejirila usoro ntụzi ụkwụ wee bido otu esi amalite.
Kwụpụ 1: Banye maka Akaụntụ Islam
Ihe mbu bu ihe mbu - banye na ikpo okwu enyi na enyi na iwu Sharia ma họrọ ma obu ihe omuma ahia nke ndi Islam ma obu choo akaụntụ nnabata. Ọ bụrụ n’ịgaghị ahụ nke ndị ahụ kpọtụrụ ndị ahịa na ohere ha nwere, ha ga - eme ka akaụntụ ọkọlọtọ dabara na mkpa gị.
Ihe ị ga - eme bụ itinye ozi nkeonwe gị, adreesị ozi-e na paswọọdụ pụrụ iche - ajụjụ ole na ole na - esochi ọnọdụ ego gị. Nke a bụ n'ihi iwu KYC (mara onye ahịa gị) nke ndị nwe obodo na-achịkwa, ya bụ iji gbochie ịchụ ego na aghụghọ ego.
Nzọụkwụ 2: Ntinye Usoro ahia gị
Fọdụ, ma ọ bụghị ihe niile, nyiwe ga-achọ ụfọdụ ozi agbakwunyere ahụmịhe ahịa gị gara aga. Ihe kpatara nke a bụ iji nyere ndị ore ịghọta gị ahụmahụ larịị ma si otú na-atụ aro ihe kwesịrị ekwesị islam akaụntụ-enyi na enyi na ngwaahịa.
Kwụpụ 3: Tinye ego na Akaụntụ Gị
Ugbu a ị debanyere aha, ị nwere ike ịga n'ihu ma kwụọ ụgwọ akaụntụ azụmaahịa Alakụba gị. Naanị họrọ site na nhọrọ ịkwụ ụgwọ dị na ụlọ ahịa ị họọrọ ma họrọ ego ị ga-etinye.
Buru n'uche, ụfọdụ ndị na-enye ọrụ nwere ego nkwụnye ego pere mpe. N'ihe banyere eToro, nke a bụ naanị $ 1,000 maka akaụntụ ahịa Islam.
Na nyiwe dịka eToro, ịtọlite ​​akaụntụ nwere ike iwe ihe na-erughị nkeji iri. Anyị na-akwado eToro maka ndị mbido dịka ọ bụghị naanị na ị nwere ike i copyomi onye ahịa nwere ahụmahụ, mana ị nwere ike ịnweta akaụntụ ngosi na $ 10 uru nke akwụkwọ ego iji egwu.
Best Islamic Trading Akaụntụ nke 2020
Ikekwe ị nwere ike ibido ma mepee akaụntụ azụmaahịa Alakụba. Ọ bụrụ na ị ka na-ekwenyeghị na nke ore ahia na-aga izute gị mkpa - mgbe ahụ nwere a lee anya na anyị na n'elu 5 Alakụba trading akaụntụ nke 2020.
1. eToro - Best Islamic Trading Account for Beginners
eToro na-etu ọnụ karịa ndị ahịa 12 nde gburugburu ụwa. E nwere ọtụtụ narị klaasị klas na-agafe n'akụkụ dị iche iche na ikpo okwu a. Ndi otu a gunyere ego, ihe ndi ahia na mkpuchi. Naanị ezigbo Crypto dị na US.
Ọ bụrụ na i mechibido ahia azụmaahịa gị site na elekere 5 nke mgbede (New York), a ga-atụgharị ahịa gị na enweghị ụgwọ ọmụrụ nwa - ịnọ n'ime iwu ego Islam. Ihe ndekọ Islam na ikpo okwu a dị mfe ịtọlite ​​ma saịtị ahụ dị mfe ịnyagharịa ma zuo oke maka ndị mbido.
eToro na-enye akaụntụ omume na $ 100,000 ego ngosi ka ị wee nwee ike ịchọta ụkwụ gị na ahịa ọ bụla ị nwere mmasị na-enweghị itinye penny.
Dika esi enweta ego eToro site na mgbasa ya. Ndị okwukwe nke Alakụba nwere ike mepee akaụntụ azụmaahịa Alakụba na nkwụnye ego kacha nta nke $ 1,0000 site na debit / kaadị akwụmụgwọ, e-obere akpa, ma ọ bụ nyefe ụlọ akụ.
Tinye ego na ụdị debit / kaadị akwụmụgwọ niile
Enweghị ego abalị
Akaụntụ bụ USD naanị na 0.5% ego ntụgharị
4. AvaTrade - Akaụntụ Islam Trading maka MT4 / MT5
Nke a Islam-enyi na enyi ore nwere zuru ikike na reputable. AvaTrade enweghị ihe ọ bụla banyere ịmegharị akụkọ ya iji gboo mkpa nke okwukwe gị na ụdị ịzụ ahịa. Ihe omuma ahia nke ndi Islam na-abia na-enweghi mgbanwe obula ma obu ugwo ubochi ka ha na-agbaso iwu Sharia.
Ebe a na-enye ọlaọcha halal na ọlaedo AvaTrade nke Islam yana ịnye gị ohere ire mmanụ n'ọdịnihu. Na Sharia-Dabara ore bụkwa maka MT4 na MT5 nke bụ ikenyeneke mbiet maka oru analysis na price chaatị dị iche iche wdg
A na-akwụ ụgwọ ụgwọ ọmụrụ nwa na akụ niile yana AvaTrade na-akwụ ụgwọ ụgwọ ego mgbe ị na-azụ ahịa azụmaahịa site na akaụntụ azụmaahịa Islam gị. A ga-akwụ ụgwọ ụgwọ nchịkwa maka ọnọdụ ọhụụ.
Biko rịba ama na ịnweghị ike ịzụ MXN, RUB, TRY, ma ọ bụ ZAR Forex ụzọ abụọ site na akaụntụ Islam gị n'elu ikpo okwu a. Nkwụnye ego achọrọ imeghe akaụntụ azụmaahịa Alakụba bụ $ 100. Naanị debanye aha, nyefee ihe akaebe nke njirimara ma dejupụta akwụkwọ arịrịọ iji malite ịzụ ahịa site na akaụntụ AvaTrade Islam.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ ga - ekwe omume ndị mmadụ ikwere n'okpukpe Alakụba ịzụ ahịa n'ime iwu nke ego Alakụba - ebe ha ga - anọgide na - asọpụrụ iwu nke Quran. Ihe ikwesiri ime bu ka ichoputa ihe nlere ahia di iche ma debanye aha na ahia nke ndi Islam.
Ọ dịkwa mkpa ka anyị cheta na ọ bụghị usoro ntanetị dị iche iche na-akpọsa akaụntụ azụmaahịa Alakụba. A na-akpọ ụfọdụ 'akaụntụ' na-enweghị ego ', ma ọ bụ akaụntụ' halal '. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ nke ọ bụla ekwuru na mbụ mana nwere mmasị na onye na-ere ahịa ahụ, wee zigara ha email ma ha nwere ike hazie akaụntụ ọkọlọtọ iji gboo mkpa ndị na-enweghị mgbanwe gị.
Maka nchebe nke gị na udo nke uche, anyị na-akwado ka ị debanye aha na onye na-ere ahịa na-ejide ikikere n'aka ahụ dịka FCA ma ọ bụ ASIC - dịka ndị anyị depụtara na ibe a.
Omume gara aga abụghị ihe na-egosi nsonaazụ n'ọdịnihu
Cryptoassets bụ akụrụngwa na-agbanwe agbanwe nke nwere ike ịgbanwe n'ọtụtụ ebe na obere oge ma yabụ na-ekwesịghị ekwesị maka ndị ọchụnta ego niile. Ndị ọzọ karịa site na CFDs, azụmaahịa cryptoassets anaghị achịkwa ma yabụ enweghị usoro iwu EU ọ bụla na-ahụ maka ya
eToro USA LLC anaghị enye CFD ma ọ nweghị onye na-anọchite anya ya ma ọ nweghị ibu ibu maka izi ezi ma ọ bụ izu ezu nke ọdịnaya nke akwụkwọ a, nke onye ọlụlụ anyị kwadebere n'iji ozi ọha na eze na-abụghị ndị kwadoro banyere eToro.
Enwere m ike ịnwale akaụntụ Islam maka n'efu?
Eeh, ọ bụrụ na onye na-ere nhọrọ ị na-ahọrọ na-enye ihe ngosi ngosi na n'elu ikpo okwu ya (dịka ọmụmaatụ) mgbe ahụ ị nwere ike ịnwale akaụntụ azụmaahịa n'efu.
Akaụntụ na-enweghị ego bụ otu ihe dị ka akaụntụ Islam. Ihe ndekọ a na-ewepu ego mgbanwe (ọmụrụ nwa / Riba) - n'ihi na amachibidoro ọmụrụ nwa n'okpuru iwu Sharia.
Ndi ndi ahia n’enye ndi ahia nke Islam?
Ee e, ọ bụghị ndị na-ere ahịa niile na-enye akaụntụ azụmaahịa Islam. Platformsfọdụ nyiwe anaghị akpọsa ngwa ahịa azụmaahịa Alakụba akọwapụtara nke ọma, mana ọ ga-agbanwe akaụntụ nwere ike iji kwado mkpa gị. Fọdụ agaghị enye akaụntụ swap-free ma ọlị. Ndị na-ere ahịa dịka eToro na AvaTrade na-enye akụkọ azụmaahịa Alakụba ma na-achịkwa ya nke ọma.
Enwere m ike ịzụ ahịa ebuka n'ime iwu ego nke Alakụba?
Ee, ị nwere ike - ọ bụrụhaala na ị na-azụ nanị ebuka nke a na-ahụta dị ka ihe ziri ezi. Maka nke a, ọ ka mma ịrapara na akaụntụ azụmaahịa Alakụba maka nduzi.
Kedụ ka m ga - esi tinye n ’akaụntụ azụmaahịa ndị Alakụba m?
Nke ahụ dabere na ikpo okwu nke onye na-ere ahịa mana usoro a na-adịkarị mfe. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anabata debit / kaadị akwụmụgwọ, e-wallets na nnyefe ụlọ akụ